Koelreuteria paniculata care | सबै रूखहरू
छवि - फ्लिकर / जैकिन्टा lluch valero
मध्यम वा साना बगैंचामा रोप्न सकिने पातलो रूखहरू मध्ये एक हो कोएलरेटरिया पानिकुलता। चिनियाँ लालटेन रूख वा साबुन रूखको नामले धेरै चिनिन्छ, यो ठूलो सजावटी मूल्य भएको बिरुवा हो, शीत सामना गर्न सक्षम छ र धेरै मर्मत आवश्यक पर्दैन।
त्यसोभए यदि तपाईंको क्षेत्रको मौसम समशीतोष्ण छ, र चार मौसमहरू राम्रोसँग भिन्न छन्, त्यसपछि हामी तपाईलाई यस बिरुवाको बारेमा सबै कुरा बताउन जाँदैछौं ताकि तपाईं आफ्नो बगैचा मा मजा लिन सक्नुहुन्छ।
1 Koelreuteria paniculata को उत्पत्ति र विशेषताहरू के हो?
3 Koelreuteria paniculata हेरचाह
3.3 सिंचाई र ग्राहक
को मूल र विशेषताहरु के हो कोएलरेटरिया पानिकुलता?
यो चीन र कोरियाको मूल निवासी पातलो रूख हो लगभग 7-8 मिटरको उचाइमा बढ्छ। यसले कम वा कम सीधा ट्रंक विकास गर्छ, र हाँगाहरूबाट बनाइएको गोलाकार र चौडा मुकुट जसबाट हरियो, पिनेट पातहरू अंकुरित हुन्छन्। यी 40 सेन्टिमिटर लामो पुग्छन्, र दाँतेदार मार्जिन छन्। शरद ऋतुको चिसोको आगमनसँगै तिनीहरू भुइँमा खस्नु अघि पहेंलो र सुन्तला रंगमा परिणत हुन्छन्।
यसका फूलहरू पनि पहेँलो हुन्छन् र गर्मीमा ४० सेन्टिमिटरसम्म लम्बाइमा अंकुरित हुन्छन्।। र यो फल लगभग6सेन्टिमिटर लामो र4सेन्टिमिटर चौडाईको क्याप्सुल हो जुन सुरुमा हरियो हुन्छ र पछि शरद ऋतुमा परिपक्व भएपछि यो सुन्तला-गुलाबी हुन्छ। भित्र7मिमी व्यासमा खैरो वा कालो बीउहरू छन्।
लालटेन रूख सजावटी बोटको रूपमा प्रयोग निजी र सार्वजनिक बगैंचामा। यो सजावट को लागी एक आदर्श बिरुवा हो, किनकि यो न केवल धेरै सुन्दर फूलहरु र शरद ऋतु रंग छ, तर यो वर्ष को न्यानो महिनाहरुमा छाया प्रदान गर्न को लागी पनि उपयोगी छ।
कहिलेकाहीँ यसलाई बोन्साई बनाउनको लागि पनि काँट्ने गरिन्छ, किनकि यसले काट्न राम्रोसँग प्रतिरोध गर्छ। यद्यपि यसलाई यसरी कायम राख्न सजिलो छैन, किनकि यो नाइट्रोजनमा समृद्ध मलहरू लागू गर्नबाट बच्न र समय समयमा यसलाई काट्न आवश्यक छ ताकि यसको पातहरू धेरै न बढोस्।
हेरचाह गर्दै कोएलरेटरिया पानिकुलता
लालटेन रूख हेरचाह गर्न सजिलो बिरुवा हो। अब, ताकि समस्याहरू छोटो वा दीर्घकालीन रूपमा उत्पन्न नहोस्, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ तपाइँका आवश्यकताहरू के हो भनेर जान्नुहुन्छ:
हामी एक बिरुवाको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन बाहिर राखिनेछ, अन्यथा यो राम्रो गर्न सक्षम हुनेछैन। साथै, यसलाई पहिलो दिन देखि घमाइलो ठाउँमा राख्नु पर्छ। यसको जराहरू आक्रामक छैनन्, यद्यपि यसलाई पर्खालबाट 2-3 मिटरमा रोप्न सल्लाह दिइन्छ ताकि यो सीधा बढ्न सक्छ र एक छेउमा झुक्नु हुँदैन।
बगैंचा: यो एउटा रूख हो जुन लगभग कुनै पनि प्रकारको माटोमा बढ्छ, जबसम्म तिनीहरू उर्वर हुन्छन्।
फूल भाँडो: यद्यपि यसलाई भाँडोमा बढ्न सिफारिस गरिएको छैन, तर यसलाई केही वर्षसम्म राख्न सकिन्छ यदि यसलाई ड्रेनेज प्वालहरू भएको एउटामा रोपिएको छ र विश्वव्यापी बढ्दो माध्यमले भरिएको छ (बिक्रीको लागि। यहाँ).
सिंचाई र ग्राहक
La कोएलरेटरिया पानिकुलता यसलाई समय समयमा पानी हाल्नु पर्छ, किनकि यसले खडेरीलाई प्रतिरोध गर्दैन। तसर्थ, यदि हामी धेरै पानी नपर्ने क्षेत्रमा बस्छौं भने, मौसम अनुसार हप्तामा एक पटक वा धेरै पटक पानी दिन सल्लाह दिइन्छ। र यो हो कि, सामान्यतया, गर्मीमा जाडोमा भन्दा धेरै पटक पानी दिन आवश्यक छ, किनकि जमिन छिटो सुक्छ।
ग्राहकको लागि, वसन्त र गर्मी मा भुक्तानी गर्नुपर्छ हरियो बिरुवाहरु को लागी मल्च, guano, humus वा उर्वरक संग यो। प्रयोगको लागि निर्देशनहरू पालना गरिनेछ ताकि कुनै समस्या उत्पन्न हुँदैन।
चीनबाट आएको साबुन वसन्त मा बीउ द्वारा गुणा। यो गर्न, यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
पहिले, तिनीहरूलाई एक गिलास पानीमा राखिनेछ, र तैरिरहेकाहरूलाई खारेज गरिनेछ किनभने तिनीहरू प्रायः अंकुरण हुँदैनन्।
यस प्रकारको बीउ ट्रेलाई विश्वव्यापी सब्सट्रेटले भरिनेछ।
त्यसपछि यसलाई पानी दिइनेछ। पृथ्वी ओसिलो हुनुपर्छ, त्यसैले पानी ड्रेनेज प्वालहरूबाट बाहिर नआएसम्म पानी खन्याइनेछ।
त्यसपछि, प्रत्येक एल्भिओलसमा अधिकतम दुई बीउहरू राखिनेछ, र तिनीहरूलाई फङ्गिसाइड (बिक्रीको लागि) संग उपचार गरिनेछ। यहाँ) ताकि कवकले तिनीहरूलाई खराब गर्दैन।
अन्तमा, तिनीहरू सब्सट्रेटको पातलो तहले ढाकिएका छन्, र ट्रे बाहिर, पूर्ण घाममा राखिएको छ।
र अब यो केवल पानी पिउने कुरा हो जब हामी सुख्खा जमिन देख्छौं, र तिनीहरूलाई अंकुरणको लागि 1-2 महिना पर्खिरहेका छौं। जब जराहरू प्वालहरूबाट बाहिर आउँछन्, हामी तिनीहरूलाई भाँडोमा रोप्न सक्छौं।
हामी यसलाई छाँट्ने सिफारिस गर्दैनौं, जबसम्म तपाईं सुक्खा वा मरेका हाँगाहरू हटाउन चाहनुहुन्न। यो एउटा रुख हो जुन जति छाँट्यो त्यति राम्रो देखिन्छ। अब, यदि हामी यसलाई सधैं भाँडामा उब्जाउन जाँदैछौं भने, हामीसँग जाडोको अन्त्यमा यो गर्नुको विकल्प हुनेछैन। यस कारणको लागि, यस अवस्थामा, हामी के गर्नेछौं हाँगाहरू थोरै काट्दै, मुकुट गोलाकार राख्न प्रयास गर्दै।
यो एक रूख हो जसले शीत सम्म प्रतिरोध गर्दछ -18ºC.
तपाईले के सोच्नु भयो कोएलरेटरिया पानिकुलता?
लेखको पूर्ण मार्ग: सबै रूखहरू » फिचस » चिनियाँ साबुनपानी (कोएलरेउटेरिया प्यानिकुलाटा)